दोस्रो बिहेको कथा| Ilam Society Uk
काठमाडौ, असार १० - स्थान : रोज भिलेज, घर नं. ५, बालकोट
समय : मध्याह्न १२ बजे
मौसम: सिमसिमे पानी ।
घरभित्र छिर्दा अभिनेता हरिवंश आचार्य खाना खाँदै थिए । रमिला पाठक उनलाई थप खाना पस्किसकेपछि आफ्नो भाग लिएर उनकै आडमा बस्दै खान थालिन् । 'खान कस्ले बनाएको ?' प्रश्न खस्न नपाउँदै हरिवंश बोले, 'भाउजूले बनाएकी ।'
'उनको हातले बनाएको यो दोस्रो छाक हो,' बिहीबार सानो जमघटमा पुनर्विवाह गरी भित्र्याइएकी रमिलालाई लक्षित गर्दै आचार्यले भने, 'खाना मीठो छ, अचारचाहिँ म आफैंले बनाएको ।' रमिला मुस्काइन् र अचार थपिदिइन् । बाहिर आकाश उघि्रँदो थियो, हरिवंश पनि आफ्नो जीवन फेरि उघि्रँदै जानेमा विश्वस्त देखिए ।
चौध महिनाअघि पत्नी मीरालाई आचार्यले गुमाएका थिए । ब्रेन ह्यामरेज भएर पत्नीको निधन भएपछि हरिवंश एक वर्ष घरबाट बाहिरै निस्किएनन् । बूढानीलकण्ठको घर बेचेर बालकोट सरे । 'चौध महिना एक्लो भएँ । कोसँग कुरा गरूँ ? उनको (मीरा) फोटो हेरेर कति रुनु ?' ५४ वर्षीय आचार्यले अन्ततः रमिलाको साथ पाए, पुरानो खुसी फर्किएको छ । जगत् हँसाएर खुसी पार्ने पात्र दुःखी बनेपछि परिस्थिति असहज बन्छ । बुटबलकी ३८ वर्षीया रमिलालाई पनि यो थाहा छ । नयाँ घर छिर्दा भित्तैभर हरिवंश-मीराका तस्बिर देखेपछि उनले आफूमा ठूलो अभिभारा आएको अनुमान लगाइन् । 'उहाँलाई खुसी पार्ने दायित्व ममा छ,' रमिलाले भनिन्, 'मन पर्ने कलाकारलाई जीवनसाथी पाएकी छु, खुसी छु ।'
उनको पनि विगत कम्ती पीडादायी थिएन । यो उनको पनि दोस्रो विवाह हो । २८ वर्षकै छँदा पतिको ब्रेन ह्यामेरजकै कारण निधन भएको थियो । आफूलाई एकल महिला भन्न नरुचाउने उनले त्यसपछिका ११ वर्ष बुटवलस्थित माइतीमा बिताइन् । 'पति नभए पनि छोरा थियो । दाजुभाइ, आमाबुबा हुनुहुन्थ्यो, कसरी एकल ?' उनले भनिन् ।
स्कुले जीवनदेखि हरिवंशका टेलिफिल्म हेर्दै आएकी रमिलाले पहिलो पटक दुई वर्षअघि लाजिम्पाटमा बाटो क्रस गर्ने क्रममा देखेकी थिइन् । 'त्यसबेला त मलाई थाहा हुने कुरै भएन,' आचार्यले भने, 'तर बिहेको लागि पहिलो पटक फोटोमा हेरें । त्यसमा छोरो पनि सँगै थियो ।' रमिलाका २१ वर्षीय छोरा परिचित थापा भारतमा इन्जिनियरिङ पढिरहेका छन् । चार महिनाअघि देखभेट भएका उनीहरू विवाह अघि एकअर्काकोमा १०/१५ पटक भेटे । रमिलाकै दिदीको घरमा भएको पहिलो भेट सम्झँदै हरिवंशले भने, 'दुई जना बसेर कुरा गर्‍यौं । उस्तै पीडा भोगेकाले एकअर्कालाई साथ दिनेमा सहमत भयौं ।' छेवैमा बसेकी रमिलाले सुनाइन्, 'उहाँ जस्तो राम्रो मान्छे पाउनु गर्वको कुरा हो ।' जोडी जमाउने जश भने हरिवंशले अभिनेत्री वसुन्धरा भुसाललाई दिए ।
'गाउँकी तारा' भन्ने टेलिफिल्मको सुटिङमा म टोलाएको देखेर वसुन्धरा दिदीले डिप्रेसन भएको छ, विवाह गर भन्नुभयो । उहाँले नै रमिलाको प्रस्ताव ल्याउनुभयो,' त्यसबेला आफ्नो अवस्था देख्दा जोकोहीले पनि विवाहको सल्लाह दिने गरेको सुनाउँदै उनले भने, 'कति कुमारी केटीका प्रस्ताव पनि नआएका होइनन् । तर मलाई दुःख बुझ्ने चाहिएको थियो । मजस्तै आफन्त गुमाएकोले मात्रै कुरा बुझ्छ भन्ने लाग्थ्यो ।'
रमिलासँग पहिलो भेटपछि उनले मदनकृष्ण श्रेष्ठ दम्पतीलाई भेट्टाए । 'दाइ, भाउजूले हुन्छ भनेपछि बिहे गर्ने आँट आयो,' उनले भने । हरिवंशलाई पछि छोराहरूले पनि सहज बनाइदिए । बिहे गरेर रोज भिलेजमा भित्र्याउँदा छोरा मोहित र मीराका भाइबुहारीले स्वागत गर्दा उनी ढुक्क भए । मीराका आफन्तले पनि बिहे गर्न सुझाए ।
दोस्रो बिहेपछि कतिले हरिवंश ढोंगी रहेछ, पहिलो पत्नीलाई देखाएको माया नाटक मात्रै रहेछ भनेर गरिएका आलोचना उनले पनि सुनेका रहेछन् । 'अरूले जे भनून्, मीरालाई कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ । जीवनमा कहिल्यै दुःख पुर्‍याइनँ भने उनी बितेपछि केका लागि एक्लै बसेर सजाय भोगूँ ? बरु उनलाई अमरत्व दिन मीरा चाइल्ड केयर खोल्दै छु ।' जीवित छँदै अर्की भित्र्याएको भए अपराध हुने जिकिर गर्दै उनले भने, 'हामी आफैं पनि मानव अधिकारका लागि सचेत, आफ्नै अधिकारबारे पनि सोच्नुपर्ने रहेछ । एक्लै बस्नु भनेको डिप्रेसड हुनु भन्ने लाग्यो ।'
धेरैले मीरालाई बिर्सनका लागि बूढानीलकण्ठको घर बेचेर नयाँ किनेको शंकामा उनको आपत्ति छ । 'मीरा छँदै सर्ने योजना बनाएका हौं । बूढानीलकण्ठको हामीले रेडिमेड किनेको घर हो । बरु उनको मिहिनेतले बनाएको घर नयाँ बजारमा छ । मह सञ्चारको अफिस राखेका छौं । त्यो घर बनाउँदा म प्रायः विदेशमै रहें । उनैले बनाएको घर भएकोले छोराहरूलाई त्यो नबेच्न भनेको छु ।' यतिबेला बायोग्राफी लेखिरहेका हरिवंशले त्यसमा एक चौथाइ स्थान मीरालाई नै दिएको खुलाए । '९० प्रतिशत काम सकिएको छ, २५ प्रतिशत त उनकै बारेमा छ । दसैंसम्ममा प्रकाशित होला ।' विवाहपछि हनिमुनका लागि कहाँ जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा हरिवंश केही गम्भीर बने । 'विवाहलाई हामीले सम्झौता मानेका छौं । त्यसैले पनि यतिबेला कुनै उत्सव मनाइरहेका छैनौं । बधाइका सन्देशको जवाफ फर्काउन उचित ठानेका छैनौं । उनको आगमनले फेरि जीवन जिउने जोस आएको छ । घर घरजस्तो भएको छ । हामीले यही घरलाई स्वर्ग बनाउने हो । यहीं नै हाम्रो हनिमुन हुन्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ असार १० ०९:४३